Wafdi uu hogaaminaayo gudoomiyaha baarlamaanka KGS oo gaaray degmada Xudur & soo dhaweyn loo sameeyay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wafdi uu hogaaminaayo gudoomiyaha baarlamaanka KGS oo gaaray degmada Xudur & soo dhaweyn loo sameeyay
Wafdiga oo isugu jira Wasiiro, Xildhibaano oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Golaha wakiiladda dowlad goboleedka koonfur galbeed Cali Saciid Fiqi ayaa gaarey Degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool.
Wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee degmada Xudur ku soo dhaweeyey Maamulka gobolka, kan degmada Xudur, isku duwaayaasha Wasaaradaha, Odayaasha dhaqanka, waxgaradka,Siyaasiinta, dhalinyaradda, haweenka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada degmada xudur .
Soo dhaweyn kadib wafdiga oo isugu jiray wasaaradaha Arrimaha gudaha dowlaha Hoose iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed gargaarka, cadaaladda,xanaanadda xoolaha, tamarta, diinta, caafimaadka, waxbarashada, shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa loo galbiyey guriga martida oo warbaahinta ay kula hadleen, iyaga o faah faahin ka bixiyay u jeedka safarkooda.
Guddoomiyaha degmada Xudurka oo hadlay ayaa kusoo dhaweeyay degmadaas Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo madaxda la socda,waxaana uu sheegay in gudoomiyihii ugu horeeyay ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed ee taga Gobolka Bakool.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed Cali Saciid Fiqi ayaa sheegay in u jeedka safrkooda uu yahay inay u kuurgalaan xaalada degmada Xudur iyo degaannada hoostaga, sidoo kalena ay kulamo la qaadan doonaan Maamulka iyo Bulshada degmada.
Wafdi uu hogaaminaayo gudoomiyaha baarlamaanka KGS oo gaaray degmada Xudur & soo dhaweyn loo sameeyay was last modified: October 26th, 2020 by Admin
RW Rooble oo saxafiyiinta Soomaaliyeed ugu Hambalyeeyay Munaasabadda 3-da May
Beesha Caalamka oo shir isugu keenaysa madaxda DFS iyo kuwa Maamul goboleedyada.
Dhageyso:-Baraamij looga hadlaayo Barashada Nafaqada wanagsan iyo badqabka cunada
Qoor Qoor iyo Denni oo Cadaado goordhaw geeyay (Sawirro)